सर्वश्रेष्ठ निलम्बित कार्य प्लेटफर्म बिक्री - Buildinglift.com
ZLP श्रृंखला निलम्बित प्लेटफार्म, जुन हाम्रो द्वारा विकसित र उत्पादन गरिएको छ, मुखौटा निर्माण, सजावट, सफाई र रखरखाव निर्माणको लागि आदर्श छ। यो पनि व्यापक रूपमा लिफ्ट स्थापना, जहाज निर्माण र मरम्मतमा, वा ठूलो आकारको ट्यांक, पुल, बन्दोबस्ती र चिम्नी जस्ता अन्य क्षेत्रमा पनि प्रयोग गरिन्छ। ZLP श्रृंखला बहुमुखी दक-डाउन प्लेटफार्मले कर्मचारीहरू सुरक्षित, सजिलो र अधिक कुशल प्लेटफर्म पहुँच प्रदान गर्दछ।
कार्य र निलम्बित कार्य प्लेटफर्मको प्रयोग
♦ उच्च वृद्धि भवनको बाह्य पर्खालको लागि सजावट र निर्माण पर्दे पर्खाल र बाहिरी भाग स्थापना।
♦ उच्च वृद्धिको निर्माणको बाह्य पर्खाल को मरम्मत, जाँच, रखरखाव र सफाई।
ठूला-ठूला परियोजनाहरूको लागि निर्माण, मरम्मत र रखरखाव जस्तै ठूलो ट्यांक, चिमनी, बांध, पुल, डेरिक।
♦ ठूलो जहाजको लागि वेल्डिङ, सफाई र चित्रकारी
♦ बिलबोर्ड स्थापना गर्ने उच्च वृद्धि भवनहरूको लागि।
निलम्बित प्लेटफार्ममा काम गर्दा के गर्नु पर्छ?
♦ सुनिश्चित गर्नुहोस् कि प्लेटफर्म स्थापित छ र कामका आवश्यकताहरू, सुरक्षा नियमहरू, मानकहरू र निर्माताको निर्दिष्टीकरण अनुसार।
♦ प्रत्येक पट्टि खरिद गर्नु अघि र पहिले सबै उपकरणहरू निरीक्षण गर्नुहोस्।
♦ उपयुक्त गिर गिरफ्तारी प्रणालीहरू प्रयोग गर्नुहोस् (उदाहरणका लागि, प्रत्येक कार्यकर्ताको लागि एक स्वतन्त्र जीवन रेखासँग जोडिएको सुरक्षा सुरक्षा कार्य)। उच्चतम प्वाइन्ट सम्भावनामा संलग्न राख्नुहोस्। यदि गिरफ्तार प्रणालीहरू आवश्यक पर्दछ भने, कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्नु भन्दा उचित प्रशिक्षण लिनु पर्छ।
♦ निश्चय गर्नुहोस् कि निलम्बित प्लेटफर्म छत बीम र संलग्नकहरू सुरक्षित छन्।
♦ यकीन गर्नुहोस् कि छत वा पर्खाल भित्री संरचनात्मक रूपमा आवाज हो जुन पनि आउट्रिगर्स वा कन्सिस हुकलाई समर्थन गर्दछ।
♦ लिङ्क गरिएको वा क्षतिग्रस्त रसहरूको लागि जाँच गर्नुहोस्।
♦ लंगरमा सबै रसहरू सुरक्षित गर्नुहोस्।
♦ सुनिश्चित गर्नुहोस् कि सबै सुरक्षा उपकरणहरू, स्टपहरू, ओवरराइड स्विचहरू र ब्रेकहरू ठीकसँग कार्य गर्दछ।
♦ वेल्डिंग वा पीसिंग उपकरण र तार सुरक्षा वा निलम्बन रोपहरू बीचको सम्पर्क रोक्नुहोस्।
♦ प्लेटफर्ममा सुरक्षित हात उपकरणहरू।
♦ सुनिश्चित गर्नुहोस् कि पावर स्रोत सुरक्षित र ठीक छ।
♦ सुरक्षित प्लेटफर्म कहिले प्रयोगमा छैन।
♦ सुनिश्चित गर्नुहोस् कि गार्ड्रिल र अनुहार बोर्डहरू स्थानमा छन्।
♦ निलम्बन रसहरू पूर्ण रूपमा जमीनमा विस्तार गर्नुहोस् वा रोपको अन्तबाट भाग्नदेखि रोक्न तार रस्सी क्लिपहरूसँग समाप्त गर्नुहोस्।
♦ पूर्णतया लोड गरिएको प्लेटफार्म बढाएर टेस्ट जाँच्नु अघि केहि फन्टहरू मैदानमा।
तपाई के गर्नु हुँदैन?
♦ प्लेटफार्म लोड क्षमता भन्दा बढी नगर्नुहोस्।
♦ इन्टरनेट स्तर वा अन्य सुरक्षित पहुँच बिन्दुहरूमा प्लेटफर्म छोड्नुहोस् वा छोड्नुहोस्।
♦ विद्युत् केबलहरू वा जडानहरूलाई गट्टर वा अन्य ठाउँमा जम्मा गर्न सक्छ जहाँ झूट गर्न अनुमति नदिनुहोस्।
♦ अवगत विद्युत सर्किट वा उपकरण नजिक काम नगर्नुहोस्।
♦ यस प्लेटफार्ममा सामेल हुनुहोस् जब सम्म यो यस उद्देश्यको लागि डिजाइन गरिएको छैन।
♦ क्षतिग्रस्त वा खराब उपकरण प्रयोग नगर्नुहोस्।
♦ प्लेटफर्मको घटकहरू बदल्नुहोस्, स्थानान्तरण वा हटाउनुहोस्।
♦ उपकरणहरू वा सामग्री को बढावा वा कम गर्न गिरने गिरफ्तारी प्रणालीहरू (जस्तै, जीवन रेखा) प्रयोग नगर्नुहोस्।
♦ कार्य प्लेटफार्म सार्न नदिनुहोस् जब सम्म सबै कामदारहरू उपयुक्त गिरने प्रणालीको द्वारा सुरक्षित गरीन्छन्।
1000 किलो 2.5 मीटर *3खण्डहरू पहुँच उपकरण निलम्बन गरिएको छ ZLP100 ...
ZLP श्रृंखलाले निलम्बित पहुँच उपकरण ZLP500 / ZLP630 / ZLP8 ...
2.5 m *3वर्गहरू अस्थायी रूपमा पहुँच उपकरण ZL ...
एल्यूमीनियम मिश्र धातु / इस्पात / गर्म जस्ती निलम्बित पहुँच eq ...
2.5mx3वर्गहरु मचान कार्य मंचहरु 800kg एल्युमिनियम ...
10 मीटर एल्यूमीनियम मिश्र धातु hoi संग कार्य मंच निलम्बित ...
सफा निर्माणको लागि 7.5M अनुकूलित 800 किलोग्राम निलम्बित प्लेटफर्महरू ...
10m इस्पात / एल्यूमीनियम निलम्बित पहुँच उपकरण ZLP1000 को लागि ...
सुरक्षा रस्सी / केबल स्टील निलम्बित कार्य प्लेटफार्म ZLP800 ...
ZLP1000 ले अस्थायी रूपमा निलम्बित प्लेटफर्म पालनाको लागि स्थापना ...
1.8 केडब्ल्यू 8 केएन ZLP 800 टिकाऊ निलम्बित कार्य प्लेटफार्म संग st ...
इस्पात / गर्म जस्ती / एल्यूमिनियम मिश्र धातु रस्सी निलंबन ...
ZLP500 एरियल निलम्बित प्लेटफर्म पालना निर्माण उपकरण ...
1000 किगोग्राम 7.5 मेक्स3सेक्शनहरू एल्यूमिनियम मिश्र धातु निलम्बित कार्य गर्दै ...
फोर्कलिफ्टले प्लेटफर्म पाडा समायोजन योग्य कार्य प्लाट निलम्बित गर्यो ...
पिन 88kw मो संग 800kg निलम्बित कार्य प्लेटफार्म ...
एकल व्यक्ति निलम्बित कार्य प्लेटफर्म ZLP100 टावर मा लागि ...
ZLP800 फ्रेस निर्माणको लागि बिजुली निलम्बन प्लेटफर्म छिराउँदै ...
जस्ती इस्पातले काम गर्ने प्लेटफार्म / पालना / स्विंग निलम्बित गर्यो ...
ZLP श्रृंखला गर्म जस्ती / एल्यूमीनियम निलम्बित प्लेटफार्म क्रैड ...
इस्पात / एल्यूमीनियम निलम्बित प्लेटफर्म पाल, 630 किगोग्राम निलम्बित ...
हट बिक्री एल्यूमिली मिश्र धातु निलम्बित प्लेटफार्म / निलम्बित gondo ...
राम्रो मूल्य निलम्बित प्लेटफर्म / निलम्बित गोन्डोला / निलम्बित क्र ...
उच्च भवन सफाई उपकरणहरु हवाई काम प्लेटफार्म मूल्य
व्यावसायिक एल्युमीनियम रखरखाव पालना खिचिएको सफाई उपकरण